Football Khabar » फिलिक्सका लागि एथ्लेटिको मड्रिडद्वारा मूल्य बढाएर प्रस्ताव !
फिलिक्सका लागि एथ्लेटिको मड्रिडद्वारा मूल्य बढाएर प्रस्ताव !
स्पेनिस क्लब एथ्लेटिको मड्रिडले पोर्चुगलका युवा फरवार्ड जाओ फिलिक्सका लागि मूल्य बढाएर नयाँ प्रस्ताव गरेको छ । पोर्चुगिज क्लब बेनफिकाका फरवार्ड उनलाई अनुबन्ध गर्न एथ्लेटिकोले यसअघि १०७ मिलियन पाउन्डको अफर गरेको थियो ।
सो प्रस्तावमा बेनफिका इच्छुक नदेखिएपछि एथ्लेटिकोले मूल्य बढाएर दोस्रोपटक ११२ मिलियन पाउन्डको अफर गरको हो । यो युरो रकम १२६ मिलियन हो ।
दोस्रोपटक रकम बढाएर प्रस्ताव अघि बढाएपछि बेन्फिाका यसमा सकारात्मक देखिएको छ । तर, एथ्लेटिकोले भने सो रकम किस्तामा तिर्ने जनाएको छ ।
यसको पुष्टि क्लब स्वयंले गरेको छ । बेनफिकाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एथ्लेटिकोले गरेको अफरमा छलपल जारी रहेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘एथ्लेटिको मड्रिडले फिलिक्सका लागि पठाएको १२६ मिलियन युरोको प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ ।’
हाल १९ वर्ष मात्रै पुगेका फिलिक्स यो सरुवा पूरा भए उनी विश्वका पाँचौं महँगा फुटबलर बन्नेछन् । उनी पिएसजीका नेइमार, पिएसजीकै केलियन एमबाप्पे, बार्सिलोनाका फिलिपे कोउटिन्हो र बार्सिलोनाकै उसामान डेम्बेलेपछि सर्वाधिक महँगा खेलाडीको सूचीमा दर्ज हुनेछन् ।
फिलिक्सलाई धेरैले पोर्चुगलका दोस्रो ‘क्रिस्टियानो रोनाल्डो’भनेर चर्चा गरिरहेका छन् । केही समयअघि मात्रै फिलिक्सले राष्ट्रिय टिममा डेब्यु गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति १२ असार २०७६, बिहीबार ०५:२३